I-Chloe x Halle Bailey Ngaba ziiNdawo zokuThola iTyhuna ye-non-Cliche
Beyoncé's protégés, ngabakuloKlowe kwaye Halle Bailey zii-duo ze-R&B zaseMelika kunye nabadlali abasandula ukukhupha ezabo ezizodwa ezinesihloko Yenze njengenxalenye ye-albhamu yesibini yesibini ezayo enesihloko IYure yokungahloneli Thixo. I-albhamu isetelwe ukukhutshwa nge-5 kaJuni.
UChloe noHalle basungule isiteshi sabo seYouTube eneminyaka eli-13 neli-11 ubudala, ngokwahlukeneyo, nesigqubuthelo sikaBeyoncé's Into egqibelele endingazange ndibenayo. Ukuguqulelwa kweBeonconcé's Ubuhlungu obuhle Uhambile kwaye watsalela ingqalelo kumculi ngokwakhe ngo-2015, watyikitya lo duo kwinkampani yakhe yolawulo, iParkwood Entertainment.
Koodade, ukuba neBeyoncé njengommeli wezolimo kwakuliphupha eliyinyaniso. Kwaye xa u-Beyoncé egqibe igama lakhe kwimpawu yakho, kungcono uphile ngokuhambelana nemilinganiselo yakhe. Unobulumko kumsebenzi-onobulumko kunye nefashoni. Ukukhawuleza phambili ukuya ku-2020, uChloe, 21 kunye noHalle, engama-20, ngoku esetyenziselwe ukuphumelela, bakhulele kwisitayela esingqongqo ngokwabo.
Ungasoloko uthembele duo dade ukuba bazise umdlalo wabo we-A njengoko befumana iindlela ezinomdla zokuvumelanisa ngaphandle kokulinganisa kakhulu. Ngokukhetha okucacileyo abamnyama nabamhlophe, amantombazana ayaziwa ukuba alinga ngesitayela sawo. Kwaye kwezona mbonakalo zintle kakhulu, zihlala zisisebenzela ngokungasifanelanga isisa kunye nokuzenzela ngaphakathi!
Singa'Siyanceda kodwa ndiyayithanda indlela uChloe kunye neHalle abadlala ngayo ngeeslouette ezimnandi njengoko bexhuma phakathi kweengubo zangaphantsi-ezesetyhini kunye nezempahla eziphefumlelweyo. Ngayo yonke imbonakalo ebomvu-yecapethi, bahambisa into engalindelekanga, engalibalekiyo kwaye eyiRave-efanelekileyo!
Jonga ezinye zeChloe kunye neHalle ezibonakala kakhulu…
Kwi-albhamu yabo entsha, uChloe kunye noHalle babelana:
"Mna no dadewethu, siziintloko zomculo onesingqi somculo wokwenene kwaye siziva ngathi sibonisa ukuba kwi-albhamu yethu yokuqala, abantwana ba Alight. Kwaye kule nyewe, sifuna kakhulu ukubonisa indlela esingabubhangisa ngayo umculo wethu kunye neebhops ezimbalwa kwaye sivumele abantu ukuba bazonwabise kwaye bonwabe kunye nengoma kunye nokuthumela imiyalezo kwi-albhamu. Besiyibiza ngokuba yiYure yokuNgamhloneliyo kuba kulungile ukuba ungafezekisi lonke ixesha. Kulungile ukuba ube nala maxesha wokuzibonakalisa xa ungaziva ungalungile. ”
Bukela uChloe x Halle Yenze ividiyo apha…
Ityala lemifanekiso: Instagram | ChloexHalle
BONISA UKUZITHANDA KWABESIFAZANE UKUZE BENZE KWI-SHOP YAKHO
Beyonce I-Beyoncé's Protégés UChloe kunye noHalle Bailey Uhlobo lweChloe kunye neHalle Bailey UChloe Bailey Chloe x Halle Halle Bailey
titi Dokubo Ngamana 22, 2020